SEMPAMA Nosy: Manao fitetezam-paritra aty SAVA ny Filoha Nasionaliny
dimanche, 02 septembre 2018 17:15
Nifamotoana teto amin’ny CIRNFP ny zoma 31 aogositra ireo mpampianatra mikambana ao anatin’ity sendika ity, izay namelabelaran’ny Filoha nasionaly Ratolojanahary Arsène: ’’Mitolona isika, tsy finiavana ny hanao takalon’aina ny zaza Malagasy fa miara resy lahatra isika fa ratsy loatra ny fiainantsika mpampianatra ankehitriny, ary amin’ny mpiasam-panjakana rehetra eto Madagasikara dia ny mpampianatra no faralahy indrindra, nefa tsy maintsy nobeazina mpampianatra ianao vao nandalo tamin’io toerana misy anao io. Na iza na iza tafapetraka eo amin’ny seza dia tokony hitodika izy, fa tsy tonga teo raha tsy nisy mpampianatra. Ary ny tena mampalahelo dia izao, na dia eny andalam-be fotsiny dia efa fantatra iny fa mpampianatra, na ny fomba famindrany, ilazana amintsika fa raha misy mpiasam-panjakana sahirana eto Madagasikara dia isika mpampianatra. Ny olona rehetra mitaingin-tseza ,dia tokony miara-mijery ny asa fampianarana sy ny mpampianatra, ary tsy ekentsika raha mbola izao zavatra iainantsika izao no hodimbiasin’ireo zanakatsika ho amin’ny rahampitso ka mitolona isika.’’
Nampitsahivina teto ihany koa ireo fitakiana izay natao ka tsy nisy valiny nahafa-po hatramin’izao ka mahatonga ny tolona mitohy hatrany.
Nampiomana ihany koa momba ny ‘’asises nationales’ na fihaonam-be ho an'ny mpampianatra ny SEMPAMA Nosy izay hotanterahina ao Antananarivo ny 24, 25, 26 Septembre 2018 izao, ka ao no handravonana ny olan'ny mpampianatra hanomanana vahaolana ho an’izy ireo ihany koa, ary izay fehin-kevitra hivoaka eo no homenay ho an'ireo kandida filoham-pirenena mba tsy hiverimberenan’izao krizy eo amin'ny sehatry ny fampianarana izao.
Momba ny fanadinana ho avy kosa dia nilaza Ratolojanahary Arsène fa samy manana safidy, manana ny fanapahan-keviny, ka tsy afaka terena ary matoa ny fanadinana omena "vacation" dia tsy andraikitra tsy maintsy atao fa efa ivelan'ny asa koa raha misy ny manery dia anjaran'ny sendika no miaro.